Uyila njani kwi-Word | Abadali be-Intanethi
Encarni Arcoya | | Ihlaziywe 28/02/2022 23:23 | Amaqhinga
Akukho mathandabuzo ukuba inkqubo ye-Word ayikho enye yeyona ndlela ilungileyo yoyilo. Kodwa ayithethi ukuba ayinakwenziwa nayo, kwaye ngeziphumo ezifanayo kakhulu nezo zeenkqubo zoyilo. Ke ngoko, ukuba ufuna ukwazi ukuba umiswe njani ngeLizwi, nokuba yimagazini, incwadi okanye olunye uhlobo lopapasho, siza kukunika iiklasi.
Kakade ke, kufuneka siqale kwisiseko sokuba uLizwi ngandlel’ ithile ulinganiselwe ngokwendlela yokwakheka, oko akuthethi ukuba aliyi kukhangeleka kakuhle.
1 Kutheni uyilo kwiLizwi
2 Uyila njani kwi-Word
2.1 Uhlobo loyilo
2.5 Izithuba phakathi kwemigca
2.6 Qaphela ubunzima befayile
Kutheni uyilo kwiLizwi
Xa kuziwa ekusebenzeni ngesakhiwo, iinkqubo ezifana ne-Indesign zivakala ngcono kakhulu kuneLizwi, eseyinkqubo yokubhaliweyo elula, kodwa ngaphandle kokuya phambili.
Nangona kunjalo, ngokuqinisekileyo uyazi ukuba i-Word inosetyenziso oluninzi kuba, ayiloncedo ekwenzeni itafile? Okanye ikhadi leshishini? Okanye ipowusta? Ngoko kutheni ingasetyenziselwa ukuyila?
Kukho izizathu ezimbalwa zokufunda indlela yokubeka kwi-Word. Ezinye zazo zezi:
Yinkqubo oyaziyo kakuhle. Ukuba ungomnye wabo babhala kakhulu kwiLizwi, ngokuqinisekileyo awunangxaki yokwazi apho yonke into ikhoyo. Oku kuya kwenza ukuba ungachithi ixesha ufumanisa ukuba yeyiphi inxalenye yenkqubo umsebenzi okhoyo, into enokwenzeka kuwe nezintsha.
Awudingi enye inkqubo kuba uyilo kufuneka luboniswe kwiPDF, kwaye oko kuthetha ukuba ungayenza ngeLizwi ngaphandle kwengxaki kwaye uyiguqulele kwiPDF ngaphandle kokuhambisa imilimitha enye kuyo.
Ngenxa yokuba uya kubeka phakathi ezininzi. Yenye ingxaki, ngakumbi kuba ukuba kwiqela eliza kujongana noyilo kukho abantu abangaziyo ukuba zisebenza njani na iinkqubo zoyilo lobuchwephesha. Iziphumo ezifanayo zinokufezekiswa ngomhleli wombhalo kwaye ngokuba "kwindawo yonke" ngakumbi uyaqinisekisa ukuba wonke umntu uya kukwazi ukusebenza nayo.
Ngoku ukuba uyazazi izizathu ezinokukhokelela kuyilo kwiLizwi (zininzi ngakumbi), inyathelo elilandelayo kukwazi ukuba ungayenza njani.
Ngokubanzi, kufuneka ubeke ingqalelo kwiinkcukacha ezithile.
Akunjalo ukuba ufuna ukubeka incwadi kunokufuna ukuba likhadi leshishini, okanye iphephancwadi. Nganye iya kuba nesakhiwo esahlukileyo kwaye ke ngoko iinkcukacha kuya kufuneka uzilungise ngokopapasho oluza kupapashwa.
Umzekelo, incwadi idla ngokuba yi-15 x 21 cm. Kodwa ikhadi leshishini linokuba ngu-8 x 10 cm, okanye ngaphantsi. Ukongeza, kwezinye iingongoma eziphambili ezifana nokuchwetheza, imida, imida, njl njl. ngelixa enye ilula.
Singalungisa oku kwifomati yoxwebhu. Oko kukuthi, singayenza ukusuka ekuqaleni, kunye noxwebhu olungenanto, okanye kunye nesele yenziwe, ungatshintsha ifomathi ukuyilungisa ibe yile nto uyifunayo.
Khawube nomfanekiso wakho ubeka incwadi kwaye ugqibile kwaye uyithathe uyiprinte. Xa uvula incwadi yokuqala, ufumanisa ukuba onke amaphepha asisikiwe, yaye isiqalo asikwazi kufundeka ngenxa yokuba “icinezelwe” kuloo ndawo. Kwenzekentoni?
Impendulo elula iya kuba: ngaba ushiye imida? Lungisa imida?
Kwaye kukuba, ukuba into oza kuyicwangcisa yincwadi, iphephancwadi okanye into efanayo ethetha ukuba "iza kuthungwa" okanye "i-stapled" kwelinye icala, kufuneka ukuba imida ibephezulu kancinane. icala elinye ukuphepha ukuba oonobumba basondelelene kuyo.
Ukukunika umbono, umda ongaphezulu nangaphandle unokuba phakathi kwe-1,7 kunye ne-2cm kodwa ngaphakathi nasezantsi kuya kuba ngcono ukushiywa kancinci.
Xa ukhetha ifonti, unokucinga ngokubeka enye yezihloko kunye nenye yesicatshulwa. Asinto ingekho ngqiqweni, ngokuchaseneyo noko. Kodwa kufuneka zombini oonobumba ukuba bafundeke ngokupheleleyo.
Ukongeza, ifonti nganye inesikali esahlukileyo, okuthetha ukuba, kwi-12, inokubonakala incinci kwaye ikwi-18 enkulu. Okanye ukuba ngo-12 kubonakala kukhulu.
Isiphakamiso sethu kukuba uzame ngaphambi kokubeka ngenxa yokuba, ukuba uthatha isigqibo sokutshintsha ubungakanani befonti xa yonke into ibekiwe, kuya kufuneka ujonge kwakhona kuba inani lamaphepha liya kwahluka.
Ulungelelwaniso lubhekisa kwindlela ofuna ukuba isicatshulwa siziswe ngayo. Oko kukuthi, ukuba ufuna ukuba ibekwe embindini, ukuba ufuna ukuba ibe kwicala (ekunene okanye ekhohlo) okanye ukuba ufuna ithethelelwe.
Kwimeko yeencwadi, amaphephancwadi nezinye izinto ezinjalo, idla ngokuthetheleleka kuba intle ngakumbi. Kodwa khumbula ukuba uLizwi uyawandisa izithuba phakathi kwamagama ngenxa yokuba akazahluli. Ngaphandle kokuba uyicela ngokucacileyo (oku kunokwenziwa ngefomathi/umhlathi/ngokulandelelana kokubhaliweyo).
Kwezinye iimeko akuyi kuba yimfuneko kwaye ungayishiya ilungelelaniswe ekhohlo (nangona ukuba ufuna amagama ahlulwe nawe unako).
Izithuba phakathi kwemigca
Isithuba somgca sisithuba phakathi kwemigca yokubhaliweyo. Oku kuvumela ukufunda ngcono phakathi kwezivakalisi, nto leyo enceda umfundi. Ukuba basondelelene kakhulu kunokwenza kube nzima ukufunda kwaye ukuba baqelelene kakhulu abayi kuthandwa.
Ngokuqhelekileyo, ixabiso elinikeziweyo li-1,5 indawo. Kodwa yonke into iya kuxhomekeka kuhlobo lwefonti ofuna ukuyibeka kunye neprojekthi onayo eqhubekayo kuba inokufuna indawo enkulu (okanye ngaphantsi). Ngokuqinisekileyo, ungaze ube ngaphantsi ko-1.
Qaphela ubunzima befayile
Xa uxwebhu lubekwe, lunobunzima obuthile. Ingxaki kukuba ukuba wongeza imifanekiso, imizobo, iitafile, njalo njalo kwiLizwi. uyenza ibenzima kakhulu kwaye inokuchaphazela isantya sekhompyuter yakho (ayikwazi ukuyiqhubekisa).
Ukunqanda oku, kuhle ukucwangcisa ngokwahlula uxwebhu lube ngamacandelo amaninzi ukuze lube khaphukhaphu kwaye lungasiniki iingxaki ukuba singaluthumeli okanye siluthuthe (umzekelo kwi-CD, i-pen drive, njl. njl.). Kwakhona, ngale ndlela uqinisekisa ukuba imemori yekhompyutheni yanele ukusebenza nayo kwaye ayikuniki iimpazamo (ukulahlekelwa ngumsebenzi owenziweyo).
Ukulungisa konke oku kwiLizwi uya kuba ukwazile ukuba netemplate yeprojekthi onayo esandleni. Kwaye kukuba uyilo kwiLizwi alunzima. Kuyinyani ukuba inqunyelwe ngakumbi kunabanye, kodwa ukuba awudingi ukwenza iprojekthi ebonakalayo, esebenzisanayo, njl. Kuya kukunceda ngaphandle kwengxaki.
Ngaba uyilo ngeLizwi? Ebenjani amava akho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uyila njani kwi-Word